Nampiakarina tany Antananarivo i Dera mba hiasa sy hianatra. Roa taona niainana tao anatin'ny tsy fisian'ny fotoana na dia ny hihinanan-kanina aza vokatr'izany. Tetsy an-daniny tsy nitsahatra ny fanampian'i Vola an'i Dera tamin'izay fianarana natao rehetra. Nisy vokany tsara tokoa izany : tsy loha-laharana fotsiny i Dera fa mba tsara toerana hatrany.
Naseho ny : 9 mey 2020
Fialan-tsasatra tapa-bolana no anton-dian-dry Vola sy ny ray aman-dreniny tao Ambatomainty, saingy fotoana nahavitan'ny fianakavian-dry Vola sy ny fianakavian-dry Dera ny làlana nosoritan'ireto ray aman-dreny roa tonta tsy maintsy hodiavin'i Dera sy i Vola, na dia zavatra hafa aza no nanaitra an'i Dera tamin'i Vola teny am-piandohana, ary zavatra hafa indray taty aoriana.
Rava tamin-kafaliana hafahafa ilay fanambadiana makotrokotroka nahavory vahoaka maro. Nipoitra tamin'ny fotoana tsy noerotreretina ny marina : zanak'i Rojofotsy i Kalamina.
Zanaka mpivarotra enta-majinika tao amin'ny tanàna antsoina hoe : Ambatomainty i Dera. Sendra nividy zavatra tao aminy i Vola indray andro no toy ny nilatsaham-baratra izy nahita ity zazavavy niditra ny tsena. Teo no nanomboka ny tantaran'i Dera sy Vola.
Pejy 10 amin'ny 58